လူဦးရေအလိုက် နိုင်ငံနှင့် နယ်မြေဒေသများ စာရင်း - ဝီကီပီးဒီးယား
၂ လူဦးရေ အလိုက် နိုင်ငံနှင့် နယ်မြေဒေသများ
နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံချင်းစီတွင် ဤအချက်အလက်များကို တစ်ပြိုင်နက်တည်း ပြင်ဆင်ထိန်းချုပ်ခြင်း မရှိသည့်အတွက် နှိုင်းယှဉ်မှုရလဒ်များသည် ကောက်ချက်လွဲမှားနေနိုင်သည်။ အလားတူ နိုင်ငံများအားလုံး၏ အချက်အလက် စုစုပေါင်းသည် ကမ္ဘာ့ စုစုပေါင်းအချက်အလက်များနှင့်လည်း ကိုက်ညီမနေနိုင်ပါ။
လူဦးရေ အလိုက် နိုင်ငံနှင့် နယ်မြေဒေသများပြင်ဆင်
တရုတ်နိုင်ငံ[မှတ်စု ၁] ၁၄၁၇၃၇၀၀၀၀ ဇူလိုင် ၂၊ ၂၀၂၂ 17.9% Official population clock
အိန္ဒိယနိုင်ငံ ၁၃၉၇၆၀၀၀၀၀ ဇူလိုင် ၂၊ ၂၀၂၂ 17.6% Official population clock
အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုနိုင်ငံ[မှတ်စု ၂] ၃၃၅၆၈၄၀၀၀ ဇူလိုင် ၂၊ ၂၀၂၂ 4.23% Official population clock
အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံ ၂၆၃,၉၉၁,၀၀၀ ဇူလိုင် ၁၊ ၂၀၁၇ 3.33% UN Projection
ဘရာဇီးနိုင်ငံ ၂၁၅၆၇၁၀၀၀ ဇူလိုင် ၂၊ ၂၀၂၂ 2.72% Official population clock
ပါကစ္စတန်နိုင်ငံ ၂၁၅၂၂၂၀၀၀ ဇူလိုင် ၂၊ ၂၀၂၂ 2.71% Official population clock Archived2May 2019 at the Wayback Machine.
နိုင်ဂျီးရီးယားနိုင်ငံ ၁၉၀,၈၈၆,၀၀၀ ဇူလိုင် ၁၊ ၂၀၁၇ 2.41% UN Projection
ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံ ၁၇၂၉၉၁၀၀၀ ဇူလိုင် ၂၊ ၂၀၂၂ 2.18% Official population clock
ရုရှားနိုင်ငံ[မှတ်စု ၃] ၁၄၆,၈၀၄,၃၇၂ ဇန်နဝါရီ ၁၊ ၂၀၁၇ 1.85% Official estimate Archived5June 2019 at the Wayback Machine.
ဂျပန်နိုင်ငံ ၁၂၆,၇၄၀,၀၀၀ ဇွန် ၁၊ ၂၀၁၇ 1.6% Monthly provisional estimate
မက္ကဆီကိုနိုင်ငံ ၁၂၃,၅၁၈,၀၀၀ ဇူလိုင် ၁၊ ၂၀၁၇ 1.56% Official projection Archived 22 June 2017 at the Wayback Machine.
ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံ ၁၁၂၇၇၀၀၀၀ ဇူလိုင် ၂၊ ၂၀၂၂ 1.42% Official population clock
အီသီယိုးပီးယားနိုင်ငံ ၁၀၂,၃၇၄,၀၄၄ ဇွန် ၁၁၊ ၂၀၁၇ 1.32% Census Population
ဗီယက်နမ်နိုင်ငံ ၉၃,၇၀၀,၀၀၀ ဇူလိုင် ၁၊ ၂၀၁၇ 1.18% Annual official projection
အီဂျစ်နိုင်ငံ ၁၀၃၉၆၅၃၀၀ ဇူလိုင် ၂၊ ၂၀၂၂ 1.31% Official population clock
ဂျာမနီနိုင်ငံ ၈၂,၈၀၀,၀၀၀ ဒီဇင်ဘာ ၃၁၊ ၂၀၁၆ 1.04% Provisional official annual estimate Archived 11 July 2017 at the Wayback Machine.
ကွန်ဂိုဒီမိုကရက်တစ်သမ္မတနိုင်ငံ ၈၁,၃၄၀,၀၀၀ ဇူလိုင် ၁၊ ၂၀၁၇ 1.030% UN Projection
အီရန်နိုင်ငံ ၈၄၇၂၈၆၀၀ ဇူလိုင် ၂၊ ၂၀၂၂ 1.069% Official population clock
တူရကီနိုင်ငံ ၇၉,၈၁၄,၈၇၁ ဒီဇင်ဘာ ၃၁၊ ၂၀၁၆ 1.01% Annual official estimate Archived 8 November 2017 at the Wayback Machine.
ထိုင်းနိုင်ငံ ၆၉,၀၃၈,၀၀၀ ဇူလိုင် ၁၊ ၂၀၁၇ 0.87% UN Projection
ပြင်သစ်နိုင်ငံ[မှတ်စု ၄] ၆၇,၀၅၅,၀၀၀ ဇွန် ၁၊ ၂၀၁၇ 0.85% Monthly official estimate
ယူနိုက်တက်ကင်းဒမ်းနိုင်ငံ ၆၅,၆၄၈,၁၀၀ ဇွန် ၁၊ ၂၀၁၆ 0.83% Official mid-year estimate
အီတလီနိုင်ငံ ၆၀,၅၈၉,၄၄၅ ဒီဇင်ဘာ ၃၁၊ ၂၀၁၆ 0.76% Official estimate Archived 16 December 2018 at the Wayback Machine.
တန်ဇေးနီးယားနိုင်ငံ[မှတ်စု ၅] ၅၇,၃၁၀,၀၀၀ ဇူလိုင် ၁၊ ၂၀၁၇ 0.72% UN projection
တောင်အာဖရိကနိုင်ငံ ၅၅,၄၂၆,၀၀၀ ဇွန် ၂၃၊ ၂၀၁၇ 0.71% Annual official estimate
မြန်မာနိုင်ငံ ၅၃,၃၇၁,၀၀၀ ဇူလိုင် ၁၊ ၂၀၁၇ 0.67% UN projection
တောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံ ၅၀,၇၀၀,၀၀၀ ဇွန် ၂၃၊ ၂၀၁၇ 0.65% Annual official estimate
ကိုလံဘီယာနိုင်ငံ ၅၂၀၀၆၃၀၀ ဇူလိုင် ၂၊ ၂၀၂၂ 0.656% Official population clock Archived 16 January 2018 at the Wayback Machine.
ကင်ညာနိုင်ငံ ၄၉,၇၀၀,၀၀၀ ဇူလိုင် ၁၊ ၂၀၁၇ 0.63% UN projection
စပိန်နိုင်ငံ ၄၆,၄၆၈,၁၀၂ ဇူလိုင် ၁၊ ၂၀၁၆ 0.59% Official estimate
အာဂျင်တီးနားနိုင်ငံ ၄၄,၂၇၁,၀၀၀ ဇူလိုင် ၁၊ ၂၀၁၇ 0.56% UN projection
ယူဂန်းဒါးနိုင်ငံ ၄၂,၈၆၃,၀၀၀ ဇူလိုင် ၁၊ ၂၀၁၇ 0.54% UN projection
ယူကရိန်းနိုင်ငံ[မှတ်စု ၆] ၄၂,၅၀၁,၇၆၇ မေ ၁၊ ၂၀၁၇ 0.54% Monthly official estimate
အယ်လ်ဂျီးရီးယားနိုင်ငံ ၄၁,၃၁၈,၀၀၀ ဇူလိုင် ၁၊ ၂၀၁၇ 0.52% UN projection
ဆူဒန်နိုင်ငံ ၄၀,၅၃၃,၀၀၀ ဇူလိုင် ၁၊ ၂၀၁၇ 0.51% UN projection
ပိုလန်နိုင်ငံ ၃၈,၄၂၄,၀၀၀ ဇန်နဝါရီ ၁၊ ၂၀၁၇ 0.48% Official estimate
အီရတ်နိုင်ငံ ၃၇,၈၈၃,၅၄၃ ဇူလိုင် ၁၊ ၂၀၁၆ 0.48% Official annual projection Archived 19 March 2017 at the Wayback Machine.
ကနေဒါနိုင်ငံ ၃၈၃၆၅၈၀၀ ဇူလိုင် ၂၊ ၂၀၂၂ 0.484% Official estimate
ဆော်ဒီအာရေဗျနိုင်ငံ ၃၄,၈၈၇,၄၆၀ ဇူလိုင် ၁၊ ၂၀၁၇
မော်ရိုကိုနိုင်ငံ ၃၃,၈၄၈,၂၄၂ ဇူလိုင် ၁၊ ၂၀၁၇ 0.41% Official estimate
မလေးရှားနိုင်ငံ ၃၄၄၀၃၂၀၀ ဇူလိုင် ၂၊ ၂၀၂၂ 0.434% Official population clock
ဥဇဘက်ကစ္စတန်နိုင်ငံ ၃၂,၁၂၁,၀၀၀ ဇန်နဝါရီ ၁၊ ၂၀၁၇ 0.41% Official population report
ပီရူးနိုင်ငံ ၃၁,၈၂၆,၀၁၈ ဇူလိုင် ၁၊ ၂၀၁၇ 0.4% Official annual projection
ဗင်နီဇွဲလားနိုင်ငံ ၃၁,၄၃၁,၁၆၄ ဇူလိုင် ၁၊ ၂၀၁၇ 0.4% Official annual projection Archived3April 2019 at the Wayback Machine.
အာဖဂန်နစ္စတန်နိုင်ငံ ၂၉,၇၀၀,၀၀၀ ဇူလိုင် ၁၊ ၂၀၁၇ 0.37% Annual official estimate Archived6July 2018 at the Wayback Machine.
ဂါနာနိုင်ငံ ၂၈,၉၅၆,၅၈၇ ဇူလိုင် ၁၊ ၂၀၁၇ 0.37% Official annual projection
နီပေါနိုင်ငံ ၂၈,၈၂၅,၇၀၉ ဇူလိုင် ၁၊ ၂၀၁၇ 0.36% Official annual projection Archived 28 January 2016 at the Wayback Machine.
အင်ဂိုလာနိုင်ငံ ၂၈,၃၅၉,၆၃၄ ဇန်နဝါရီ ၁၊ ၂၀၁၇ 0.36% Official Estimate Archived4June 2016 at the Wayback Machine.
ယီမင်နိုင်ငံ ၂၈,၂၅၀,၀၀၀ ဇူလိုင် ၁၊ ၂၀၁၇ 0.36% UN projection
မိုဇမ်ဘစ်နိုင်ငံ ၂၇,၁၂၈,၅၃၀ ဇူလိုင် ၁၊ ၂၀၁၇ 0.34% Annual official projection
မဒါဂတ်စကားနိုင်ငံ ၂၅,၅၇၁,၀၀၀ ဇူလိုင် ၁၊ ၂၀၁၇ 0.320% UN projection
မြောက်ကိုရီးယားနိုင်ငံ ၂၅,၄၉၁,၀၀၀ ဇူလိုင် ၁၊ ၂၀၁၇ 0.32% UN projection
ဩစတြေးလျနိုင်ငံ ၂၆၄၇၅၇၀၀ ဇူလိုင် ၂၊ ၂၀၂၂ 0.334% Official population clock
အိုင်ဗရီကို့စ်နိုင်ငံ ၂၄,၂၉၅,၀၀၀ ဇူလိုင် ၁၊ ၂၀၁၇ 0.310% UN projection
ထိုင်ဝမ်နိုင်ငံ[မှတ်စု ၇] ၂၃,၅၅၀,၀၇၇ မေ ၁၊ ၂၀၁၇ 0.3% Monthly official estimate
ကင်မရွန်းနိုင်ငံ ၂၃,၂၄၈,၀၄၄ ဇန်နဝါရီ ၁၊ ၂၀၁၇ 0.290% Annual official projection
နိုင်ဂျာနိုင်ငံ ၂၁,၅၆၄,၀၀၀ ဇူလိုင် ၁၊ ၂၀၁၇ 0.27% UN projection
သီရိလင်္ကာနိုင်ငံ ၂၁,၂၀၃,၀၀၀ ဇူလိုင် ၁၊ ၂၀၁၆ 0.27% Official estimate
ရိုမေးနီးယားနိုင်ငံ ၁၉,၇၆၀,၀၀၀ ဇန်နဝါရီ ၁၊ ၂၀၁၆ 0.25% Annual official estimate
ဘာကီးနားဖားဆိုနိုင်ငံ ၁၉,၆၃၂,၁၄၇ ဇူလိုင် ၁၊ ၂၀၁၇ 0.25% Annual official projection Archived 21 December 2016 at the Wayback Machine.
မာလီနိုင်ငံ ၁၈,၉၀၇,၀၀၀ ဇူလိုင် ၁၊ ၂၀၁၇ 0.24% UN projection
ဆီးရီးယားနိုင်ငံ ၁၈,၉၀၆,၉၈၅ ဇူလိုင် ၆၊ ၂၀၁၇ 0.24% UN projection
မာလဝီနိုင်ငံ ၁၈,၆၂၂,၀၀၀ ဇူလိုင် ၁၊ ၂၀၁၇ 0.235% UN Projection
ချီလီနိုင်ငံ ၁၈,၃၇၃,၉၁၇ ဇူလိုင် ၁၊ ၂၀၁၇ 0.23% Official annual projection
ကာဇက်စတန်နိုင်ငံ ၁၈,၀၁၄,၂၀၀ ဇွန် ၁၊ ၂၀၁၇ 0.23% Official estimate
နယ်သာလန်နိုင်ငံ ၁၇၆၃၃၀၀၀ ဇူလိုင် ၂၊ ၂၀၂၂ 0.222% Official population clock Archived9October 2018 at the Wayback Machine.
အီကွေဒေါနိုင်ငံ ၁၇၉၀၄၇၀၀ ဇူလိုင် ၂၊ ၂၀၂၂ 0.226% Official population clock
ဂွါတီမာလာနိုင်ငံ ၁၆,၁၇၆,၁၃၃ ဇူလိုင် ၁၊ ၂၀၁၅ 0.2% Official estimate
ဇမ်ဘီယာနိုင်ငံ ၁၅,၉၃၃,၈၈၃ ဇူလိုင် ၁၊ ၂၀၁၆ 0.2% Official annual projection Archived 13 November 2015 at the Wayback Machine.
ကိုလံဘီယာနိုင်ငံ ၁၅,၆၂၆,၄၄၄ ဇူလိုင် ၁၊ ၂၀၁၆ 0.2% Official annual projection
ဆီနီဂေါနိုင်ငံ ၁၅,၂၅၆,၃၄၆ ဇန်နဝါရီ ၁၊ ၂၀၁၇ 0.190% Official annual projection
ချဒ်နိုင်ငံ ၁၄,၉၀၀,၀၀၀ ဇူလိုင် ၁၊ ၂၀၁၇ 0.19% UN projection
ဇင်ဘာဘွေနိုင်ငံ ၁၄,၅၄၂,၂၃၅ ဇူလိုင် ၁၊ ၂၀၁၇ 0.18% Official annual projection Archived 28 April 2016 at the Wayback Machine.
ဂီနီနိုင်ငံ ၁၃,၂၉၁,၀၀၀ ဇူလိုင် ၁၊ ၂၀၁၇ 0.17% UN projection
တောင်ဆူဒန်နိုင်ငံ ၁၂,၁၃၁,၀၀၀ ဇူလိုင် ၁၊ ၂၀၁၆ 0.15% Official annual projection
ရဝမ်ဒါနိုင်ငံ ၁၁,၈၀၉,၃၀၀ ဇူလိုင် ၁၊ ၂၀၁၇ 0.15% Official projection (medium scenario)
ဆိုမာလီယာနိုင်ငံ[မှတ်စု ၈] ၁၁,၃၉၂,၀၀၀ ဇူလိုင် ၁၊ ၂၀၁၇ 0.14% UN projection
ဘယ်လ်ဂျီယမ်နိုင်ငံ ၁၁,၃၆၂,၆၀၂ မေ ၁၊ ၂၀၁၇ 0.14% Monthly official estimate
တူနီးရှားနိုင်ငံ ၁၁,၂၉၉,၄၀၀ ဇူလိုင် ၁၊ ၂၀၁၆ 0.14% Official estimate Archived 10 June 2016 at the Wayback Machine.
ဟေတီနိုင်ငံ ၁၁,၂၄၄,၇၇၄ ဇူလိုင် ၁၊ ၂၀၁၇ 0.14% Official projection Archived 19 February 2015 at the Wayback Machine.
ကျူးဘားနိုင်ငံ ၁၁,၂၃၉,၂၂၄ ဒီဇင်ဘာ ၃၁၊ ၂၀၁၅ 0.14% Annual official estimate Archived 31 July 2017 at the Wayback Machine.
ဘိုလီးဗီးယားနိုင်ငံ ၁၁,၁၄၅,၇၇၀ ဇူလိုင် ၁၊ ၂၀၁၇ 0.14% Official Estimate
ဂရိနိုင်ငံ ၁၀,၇၈၃,၇၄၈ ဇန်နဝါရီ ၁၊ ၂၀၁၆ 0.14% Official estimate
ဘီနင်နိုင်ငံ ၁၀,၆၅၃,၆၅၄ ဇူလိုင် ၁၊ ၂၀၁၆ 0.13% Official projection
ချက်သမ္မတနိုင်ငံ ၁၀,၅၇၉,၀၆၇ မတ် ၃၁၊ ၂၀၁၇ 0.13% Official quarterly estimate
ဘူရွန်ဒီနိုင်ငံ ၁၀,၄၀၀,၉၃၈ ဇူလိုင် ၁၊ ၂၀၁၇ 0.13% Official annual projection Archived3April 2019 at the Wayback Machine.
ပေါ်တူဂီနိုင်ငံ ၁၀,၃၀၉,၅၇၃ ဒီဇင်ဘာ ၃၁၊ ၂၀၁၆ 0.13% Annual official estimate
ဒိုမီနီကန်သမ္မတနိုင်ငံ ၁၀,၁၆၉,၁၇၂ ဇူလိုင် ၁၊ ၂၀၁၇ 0.13% Official projection Archived 25 May 2017 at the Wayback Machine.
အာရပ်စော်ဘွားများပြည်ထောင်စုနိုင်ငံ ၁၀,၁၄၅,၃၁၂ ဇူလိုင် ၁၊ ၂၀၁၇ 0.13% Official annual projection
ဆွီဒင်နိုင်ငံ ၁၀၅၃၂၄၀၀ ဇူလိုင် ၂၊ ၂၀၂၂ 0.133% Official Population Clock
ဂျော်ဒန်နိုင်ငံ ၁၁၁၂၆၄၅၀ ဇူလိုင် ၂၊ ၂၀၂၂ 0.14% Official population clock Archived 19 October 2017 at the Wayback Machine.
အဇာဘိုင်ဂျန်နိုင်ငံ ၉,၈၂၃,၆၆၇ မတ် ၁၊ ၂၀၁၇ 0.12% Official estimate Archived 25 May 2017 at the Wayback Machine.
ဟန်ဂေရီနိုင်ငံ ၉,၇၉၉,၀၀၀ ဇန်နဝါရီ ၁၊ ၂၀၁၇ 0.12% Annual official estimate
ဘီလာရုဇ်နိုင်ငံ ၉,၄၉၈,၆၀၀ ဧပြီ ၁၊ ၂၀၁၇ 0.12% Quarterly official estimate Archived 1 November 2019 at the Wayback Machine.
ဟွန်ဒူးရပ်စ်နိုင်ငံ ၈,၈၆၆,၃၅၁ ဇူလိုင် ၁၊ ၂၀၁၇ 0.112% Official annual projection
ဩစတြီးယားနိုင်ငံ ၈,၇၈၃,၁၉၈ ဧပြီ ၁၊ ၂၀၁၇ 0.111% Quarterly provisional figure
တာဂျစ်ကစ္စတန်နိုင်ငံ ၈,၇၄၂,၀၀၀ ဇန်နဝါရီ ၁၊ ၂၀၁၇ 0.11% Official estimate
အစ္စရေးနိုင်ငံ ၉၅၄၉၅၈၀ ဇူလိုင် ၂၊ ၂၀၂၂ 0.12% Official population clock
ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံ ၈,၄၁၇,၇၀၀ ဒီဇင်ဘာ ၃၁၊ ၂၀၁၆ 0.106% Quarterly provisional figure
ပါပူအာနယူးဂီနီနိုင်ငံ ၈,၁၅၁,၃၀၀ ဇူလိုင် ၁၊ ၂၀၁၆ 0.103% Annual official estimate
ဟောင်ကောင် (တရုတ်နိုင်ငံ) ၇,၃၇၄,၉၀၀ ဒီဇင်ဘာ ၃၁၊ ၂၀၁၆ 0.093% Official estimate
တိုဂိုနိုင်ငံ ၇,၁၇၈,၀၀၀ ဇူလိုင် ၁၊ ၂၀၁၇ 0.091% Official estimate Archived 8 September 2015 at the Wayback Machine.
ဘူဂေးရီးယားနိုင်ငံ ၇,၁၀၁,၈၅၉ ဒီဇင်ဘာ ၃၁၊ ၂၀၁၆ 0.09% Official estimate Archived 25 June 2018 at the Wayback Machine.
ဆီရာလီယွန်နိုင်ငံ ၇,၀၇၅,၆၄၁ ဒီဇင်ဘာ ၄၊ ၂၀၁၅ 0.089% Preliminary 2015 census result
ဆားဘီးယားနိုင်ငံ[မှတ်စု ၉] ၇,၀၅၈,၃၂၂ ဇွန် ၃၀၊ ၂၀၁၆ 0.089% Annual official estimate
ပါရာဂွေးနိုင်ငံ ၆,၉၅၃,၆၄၆ ဇန်နဝါရီ ၁၊ ၂၀၁၇ 0.088% Official estimate
အယ်ဆာဗေဒိုနိုင်ငံ ၆,၅၈၁,၉၄၀ ဇူလိုင် ၁၊ ၂၀၁၇ 0.083% Official projection
လာအိုနိုင်ငံ ၆,၄၉၂,၄၀၀ မတ် ၁၊ ၂၀၁၅ 0.082% Preliminary 2015 census result Archived 18 March 2020 at the Wayback Machine.
လစ်ဗျားနိုင်ငံ ၆,၃၈၅,၀၀၀ ဇူလိုင် ၁၊ ၂၀၁၆ 0.081% Official annual projection
နီကာရာဂွါနိုင်ငံ ၆,၂၆၂,၇၀၃ ဇန်နဝါရီ ၁၊ ၂၀၁၅ 0.079% Official estimate
ကာဂျစ္စတန်နိုင်ငံ ၆,၁၄၀,၂၀၀ ဇန်နဝါရီ ၁၊ ၂၀၁၇ 0.077% Official estimate
လက်ဘနွန်နိုင်ငံ ၅,၉၈၈,၀၀၀ ဇူလိုင် ၁၊ ၂၀၁၆ 0.076% UN projection
ဒိန်းမတ်နိုင်ငံ ၅,၇၅၆,၁၇၀ မတ် ၃၁၊ ၂၀၁၇ 0.073% Quarterly official estimate
စင်ကာပူနိုင်ငံ ၅,၆၀၇,၃၀၀ ဇူလိုင် ၁၊ ၂၀၁၆ 0.071% Official estimate Archived 29 November 2015 at the Wayback Machine.
ဖင်လန်နိုင်ငံ ၅,၅၀၅,၅၇၅ ဧပြီ ၃၀၊ ၂၀၁၇ 0.069% Monthly official estimate
အီရီထရီးယားနိုင်ငံ ၅,၄၈၂,၀၀၀ ဇူလိုင် ၁၊ ၂၀၁၇ 0.069% UN projection
ဆလိုဗက်ကီးယားနိုင်ငံ ၅,၄၃၅,၃၄၃ ဒီဇင်ဘာ ၃၁၊ ၂၀၁၆ 0.069% Official estimate
နော်ဝေနိုင်ငံ ၅,၂၆၇,၁၄၆ ဧပြီ ၁၊ ၂၀၁၇ 0.066% Quarterly official estimate
ဗဟိုအာဖရိကသမ္မတနိုင်ငံ ၅,၀၉၉,၀၀၀ ဇူလိုင် ၁၊ ၂၀၁၇ 0.064% UN projection
ကော့စတာရီကာနိုင်ငံ ၄,၈၉၀,၃၇၉ ဇွန် ၃၀၊ ၂၀၁၆ 0.062% Official estimate
ပါလက်စတိုင်း ၄,၈၁၆,၅၀၃ ဇူလိုင် ၁၊ ၂၀၁၆ 0.061% Official estimate
နယူးဇီလန်နိုင်ငံ ၅၁၉၁၆၄၀ ဇူလိုင် ၂၊ ၂၀၂၂ 0.0655% Official population clock
အိုင်ယာလန်နိုင်ငံ ၄,၇၅၇,၉၇၆ ဇူလိုင် ၁၄၊ ၂၀၁၆ 0.06% Preliminary 2016 census result
တာ့ခ်မင်နစ္စတန်နိုင်ငံ ၄,၇၅၁,၁၂၀ ဒီဇင်ဘာ ၂၆၊ ၂၀၁၂ 0.06% Preliminary 2012 census result
ကွန်ဂိုသမ္မတနိုင်ငံ ၄,၇၄၁,၀၀၀ ဇူလိုင် ၁၊ ၂၀၁၆ 0.06% UN projection
အိုမန်နိုင်ငံ ၄,၅၇၃,၀၇၅ ဖေဖော်ဝါရီ ၁၊ ၂၀၁၇ 0.058% Official estimate Archived9October 2016 at the Wayback Machine.
ခရိုအေးရှားနိုင်ငံ ၄,၁၅၄,၂၁၃ ဒီဇင်ဘာ ၃၁၊ ၂၀၁၆ 0.052% Annual official estimate
ကူဝိတ်နိုင်ငံ ၄,၁၃၂,၄၁၅ ဇူလိုင် ၁၊ ၂၀၁၆ 0.052% Official estimate
လိုက်ဘေးရီးယားနိုင်ငံ ၄,၀၇၆,၅၃၀ ဇူလိုင် ၁၊ ၂၀၁၆ 0.051% Official projection Archived 24 February 2021 at the Wayback Machine.
ပနားမားနိုင်ငံ ၃,၈၁၄,၆၇၂ ဇူလိုင် ၁၊ ၂၀၁၆ 0.048% Official estimate
မော်ရီတေးနီးယားနိုင်ငံ ၃,၇၁၈,၆၇၈ ဇူလိုင် ၁၊ ၂၀၁၆ 0.047% Annual official projection
ဂျော်ဂျီယာနိုင်ငံ[မှတ်စု ၁၀] ၃,၇၁၈,၂၀၀ ဇန်နဝါရီ ၁၊ ၂၀၁၇ 0.047% Annual official estimate
မော်လ်ဒိုဗာနိုင်ငံ[မှတ်စု ၁၁] ၃,၅၅၀,၉၀၀ ဇန်နဝါရီ ၁၊ ၂၀၁၇ 0.045% Official estimate
ဘော့စနီးယားနှင့် ဟာဇီဂိုဗီးနားနိုင်ငံ ၃,၅၃၁,၁၅၉ အောက်တိုဘာ ၁၅၊ ၂၀၁၃ 0.045% Final 2013 census result Archived 24 December 2017 at the Wayback Machine.
ဥရုဂွေးနိုင်ငံ ၃,၄၉၃,၂၀၅ ဇွန် ၃၀၊ ၂၀၁၇ 0.044% Annual official projection
ပေါ်တိုရီကိုနိုင်ငံ (U.S.) ၃,၄၁၁,၃၀၇ ဇူလိုင် ၁၊ ၂၀၁၆ 0.043% Official estimate
မွန်ဂိုးလီးယားနိုင်ငံ ၃၄၇၅၃၀၀ ဇူလိုင် ၂၊ ၂၀၂၂ 0.044% Official population clock Archived5July 2017 at the Wayback Machine.
အာမေးနီးယားနိုင်ငံ ၂,၉၈၁,၅၀၀ မတ် ၃၁၊ ၂၀၁၇ 0.038% Quarterly official estimate
အယ်လ်ဘေးနီးယားနိုင်ငံ ၂,၈၇၆,၅၉၁ ဇန်နဝါရီ ၁၊ ၂၀၁၇ 0.036% Annual official estimate Archived 16 October 2017 at the Wayback Machine.
လစ်သူယေးနီးယားနိုင်ငံ ၂,၈၂၃,၆၁၈ ဇွန် ၁၊ ၂၀၁၇ 0.036% Monthly official estimate
ဂျမေကာနိုင်ငံ ၂,၇၃၀,၈၉၄ ဒီဇင်ဘာ ၃၁၊ ၂၀၁၆ 0.034% Official estimate
ကာတာနိုင်ငံ ၂,၆၇၅,၅၂၂ ဇန်နဝါရီ ၃၁၊ ၂၀၁၇ 0.034% Monthly official estimate
နမီးဘီးယားနိုင်ငံ ၂,၃၂၄,၃၈၈ ဇူလိုင် ၁၊ ၂၀၁၆ 0.029% Official projection
ဘော့ဆွာနာနိုင်ငံ ၂,၂၃၀,၉၀၅ ဇူလိုင် ၁၊ ၂၀၁၆ 0.028% Official annual projection Archived 19 September 2016 at the Wayback Machine.
မက်စီဒိုးနီးယားနိုင်ငံ ၂,၀၇၃,၇၀၂ ဒီဇင်ဘာ ၃၁၊ ၂၀၁၆ 0.026% Official estimate
ဆလိုဗေးနီးယားနိုင်ငံ ၂,၀၆၅,၈၉၅ ဇန်နဝါရီ ၁၊ ၂၀၁၇ 0.026% Official estimate
လတ်ဗီယာနိုင်ငံ ၁,၉၃၉,၅၀၀ ဇွန် ၁၊ ၂၀၁၇ 0.024% Monthly official estimate Archived 28 June 2013 at the Wayback Machine.
လီဆိုသိုနိုင်ငံ ၁,၉၁၆,၀၀၀ ဇူလိုင် ၁၊ ၂၀၁၄ 0.024% Official estimate
ဂမ်ဘီယာနိုင်ငံ ၁,၈၈၂,၄၅၀ ဧပြီ ၁၅၊ ၂၀၁၃ 0.024% Preliminary 2013 census result
Kosovo[မှတ်စု ၁၂] ၁,၈၃၆,၉၇၈ ဇန်နဝါရီ ၁၊ ၂၀၁၆ 0.023% Official annual projection Archived 18 October 2015 at the Wayback Machine.
ဂါဘွန်နိုင်ငံ ၁,၈၁၁,၀၇၉ ဇွန် ၁၊ ၂၀၁၆ 0.023% Estimate (press release)
ဂီနီ-ဘီစောနိုင်ငံ ၁,၅၄၇,၇၇၇ ဇူလိုင် ၁၊ ၂၀၁၆ 0.02% Official projection Archived2February 2017 at the Wayback Machine.
ဘာရိန်းနိုင်ငံ ၁,၄၀၄,၉၀၀ ဇူလိုင် ၁၊ ၂၀၁၆ 0.018% Official annual projection Archived6February 2017 at the Wayback Machine.
ထရီနီဒတ်နှင့် တိုဘက်ဂိုနိုင်ငံ ၁,၃၅၃,၈၉၅ ဇူလိုင် ၁၊ ၂၀၁၆ 0.017% Official estimate
အက်စတိုးနီးယားနိုင်ငံ ၁,၃၁၇,၇၉၇ ဇန်နဝါရီ ၁၊ ၂၀၁၇ 0.017% Official estimate Archived 23 November 2012 at the Wayback Machine.
မောရစ်ရှနိုင်ငံ ၁,၂၆၃,၈၂၀ ဒီဇင်ဘာ ၃၁၊ ၂၀၁၆ 0.016% Official estimate
အီကွေတာဂီနီနိုင်ငံ ၁,၂၂၂,၄၄၂ ဇူလိုင် ၄၊ ၂၀၁၅ 0.015% Preliminary 2015 census result
အရှေ့တီမောနိုင်ငံ ၁,၁၆၇,၂၄၂ ဇူလိုင် ၁၁၊ ၂၀၁၅ 0.015% Preliminary 2015 census result
ဆွာဇီလန်နိုင်ငံ ၁,၁၃၂,၆၅၇ ဇူလိုင် ၁၊ ၂၀၁၆ 0.014% Official projection Archived 23 July 2015 at the Wayback Machine.
ဂျီဘူတီနိုင်ငံ ၉၀၀,၀၀၀ ဇူလိုင် ၁၊ ၂၀၁၆ 0.011% UN projection
ဖီဂျီနိုင်ငံ ၈၆၉,၄၅၈ ဇူလိုင် ၁၊ ၂၀၁၅ 0.011% Annual official estimate
ဆိုက်ပရပ်စ်နိုင်ငံ ၈၄၈,၃၀၀ ဒီဇင်ဘာ ၃၁၊ ၂၀၁၅ 0.011% Official estimate
ကိုမိုရိုနိုင်ငံ ၈၀၆,၁၅၃ ဇူလိုင် ၁၊ ၂၀၁၆ 0.01% Official estimate
ဘူတန်နိုင်ငံ ၈၅၄၂၄၀ ဇူလိုင် ၂၊ ၂၀၂၂ 0.0108% Official population clock Archived 16 August 2016 at the Wayback Machine.
ဂိုင်ယာနာနိုင်ငံ ၇၄၆,၉၀၀ ဇူလိုင် ၁၊ ၂၀၁၃ 0.009% Official estimate Archived 29 January 2016 at the Wayback Machine.
မကာအို (တရုတ်နိုင်ငံ) ၆၄၈,၃၀၀ မတ် ၃၁၊ ၂၀၁၇ 0.008% Official quarterly estimate
ဆော်လမွန်ကျွန်းစု ၆၄၂,၀၀၀ ဇူလိုင် ၁၊ ၂၀၁၅ 0.008% Annual official estimate
မွန်တီနီဂရိုးနိုင်ငံ ၆၂၂,၃၈၇ ဇန်နဝါရီ ၁၊ ၂၀၁၇ 0.008% Official estimate
အနောက်ဆဟာရ[မှတ်စု ၁၃] ၅၈၄,၀၀၀ ဇူလိုင် ၁၊ ၂၀၁၆ 0.0074% UN projection
လူဇင်ဘတ်နိုင်ငံ ၅၉၀,၆၆၇ ဇန်နဝါရီ ၁၊ ၂၀၁၇ 0.0074% 
ဆူရာနမ်နိုင်ငံ ၅၄၁,၆၃၈ ဩဂုတ် ၁၃၊ ၂၀၁၂ 0.0068% Final 2012 census result
ကိတ်ဗာဒီနိုင်ငံ ၅၃၁,၂၃၉ ဇူလိုင် ၁၊ ၂၀၁၆ 0.0067% Official annual projection Archived 10 September 2014 at the Wayback Machine.
ထရန်နစ္စတြီးယား[မှတ်စု ၁၄] ၄၇၅,၆၆၅ အောက်တိုဘာ ၁၅၊ ၂၀၁၅ 0.006% Preliminary 2015 census result
မော်လတာနိုင်ငံ ၄၂၉,၃၄၄ ဒီဇင်ဘာ ၃၁၊ ၂၀၁၄ 0.0054% Official estimate
ဘရူနိုင်းနိုင်ငံ ၄၁၇,၂၀၀ ဇူလိုင် ၁၊ ၂၀၁၅ 0.0053% Official estimate Archived 11 November 2016 at the Wayback Machine.
ဘလိဇ်နိုင်ငံ ၃၈၀,၀၁၀ အောက်တိုဘာ ၁၊ ၂၀၁၆ 0.0048% Official estimate
ဘဟားမားနိုင်ငံ ၃၇၈,၀၄၀ ဇူလိုင် ၁၊ ၂၀၁၆ 0.0048% Official projection
မော်လဒိုက်နိုင်ငံ ၃၄၄,၀၂၃ စက်တင်ဘာ ၂၀၊ ၂၀၁၄ 0.0043% Preliminary 2014 census result
အိုက်စလန်နိုင်ငံ ၃၄၀,၁၁၀ မတ် ၃၁၊ ၂၀၁၇ 0.0043% Official quarterly estimate
မြောက်ပိုင်းဆိုက်ပရပ်စ်နိုင်ငံ[မှတ်စု ၁၅] ၃၁၃,၆၂၆ ဇွန် ၃၀၊ ၂၀၁၄ 0.004% Official estimate Archived 8 January 2016 at the Wayback Machine.
ဘာဘေးဒိုးစ်နိုင်ငံ ၂၈၅,၀၀၀ ဇူလိုင် ၁၊ ၂၀၁၆ 0.0036% UN projection
ဗနွားတူနိုင်ငံ ၂၇၇,၅၀၀ ဇူလိုင် ၁၊ ၂၀၁၅ 0.0035% Annual official estimate
ပြင်သစ်ပိုလီနီးရှား (ပြင်သစ်နိုင်ငံ) ၂၇၁,၈၀၀ ဒီဇငဘာ ၃၁၊ ၂၀၁၄ 0.0034% Official estimate
နယူးကယ်လီဒိုးနီးယား (ပြင်သစ်နိုင်ငံ) ၂၆၈,၇၆၇ ဩဂုတ် ၂၆၊ ၂၀၁၄ 0.0034% Preliminary 2014 census result
အက်ဘ်ခါဇီယာ[မှတ်စု ၁၆] ၂၄၀,၇၀၅ ဖေဖော်ဝါရီ ၂၈၊ ၂၀၁၁ 0.003% 2011 census result Archived9February 2012 at the Wayback Machine.
ဆမိုးအားနိုင်ငံ ၁၉၆,၃၁၅ ဇန်နဝါရီ ၁၊ ၂၀၁၇ 0.0025% Official projection Archived3April 2019 at the Wayback Machine.
ဆောင်တူမေးနှင့် ပရင်စီပီနိုင်ငံ ၁၈၇,၃၅၆ မေ ၁၃၊ ၂၀၁၂ 0.0024% 2012 census result Archived3March 2016 at the Wayback Machine.
စိန့်လူစီယာနိုင်ငံ ၁၈၆,၀၀၀ ဇူလိုင် ၁၊ ၂၀၁၆ 0.0023% UN projection
ဂူအမ် (U.S.) ၁၈၄,၂၀၀ ဇူလိုင် ၁၊ ၂၀၁၅ 0.0023% Annual official estimate
ကျူရာဆိုး (နယ်သာလန်) ၁၅၈,၉၈၆ ဇန်နဝါရီ ၁၊ ၂၀၁၆ 0.002% Annual official estimate Archived 25 May 2017 at the Wayback Machine.
နာဂိုမို-ကရာဘက် သမ္မတနိုင်ငံ[မှတ်စု ၁၇] ၁၅၀,၉၃၂ ဒီဇင်ဘာ ၁၊ ၂၀၁၅ 0.0019% Preliminary 2015 census result Archived 15 August 2016 at the Wayback Machine.
ကီရီဘတ်စ်နိုင်ငံ ၁၁၃,၄၀၀ ဇူလိုင် ၁၊ ၂၀၁၅ 0.0014% Annual official estimate
အာရူးဗာ (နယ်သာလန်) ၁၁၀,၁၀၈ ဒီဇင်ဘာ ၂၁၊ ၂၀၁၅ 0.0014% Official quarterly estimate
စိန့်ဗင်းဆင့်နှင့်ဂရိနေဒိုင်နိုင်ငံ ၁၀၉,၉၉၁ ဇွန် ၁၂၊ ၂၀၁၂ 0.0014% Preliminary 2012 census result
အမေရိကန် ဗာဂျင်အိုင်းလန်း (U.S.) ၁၀၆,၀၀၀ ဇူလိုင် ၁၊ ၂၀၁၆ 0.0013% UN projection
ဂရီနေဒါနိုင်ငံ ၁၀၃,၃၂၈ မေ ၁၂၊ ၂၀၁၁ 0.0013% 2011 census result Archived 14 June 2012 at the Wayback Machine.
တုံဂါနိုင်ငံ ၁၀၃,၂၅၂ နိုဝင်ဘာ ၃၀၊ ၂၀၁၁ 0.0013% 2011 census result
မိုက်ခရိုနီးရှားနိုင်ငံ ၁၀၂,၈၀၀ ဇူလိုင် ၁၊ ၂၀၁၅ 0.0013% Annual official estimate
ဂျာဇီ (UK) ၁၀၂,၇၀၀ ဒီဇင်ဘာ ၃၁၊ ၂၀၁၅ 0.0013% Annual official estimate
ဆေးရှဲနိုင်ငံ ၉၄,၂၀၅ ဒီဇင်ဘာ ၃၁၊ ၂၀၁၆ 0.0012% Official estimate
အင်တီဂွါနှင့် ဘာဘူဒါနိုင်ငံ ၈၆,၂၉၅ မေ ၂၇၊ ၂၀၁၁ 0.0011% Preliminary 2011 census result
မမ်းကျွန်း (UK) ၈၃,၃၁၄ ဧပြီ ၂၄၊ ၂၀၁၆ 0.0011% 2016 census result
အင်ဒိုရာနိုင်ငံ ၇၈,၂၄၆ ဒီဇင်ဘာ ၃၁၊ ၂၀၁၆ 0.001% Annual official estimate Archived 25 May 2017 at the Wayback Machine.
ဒိုမီနီကာနိုင်ငံ ၇၁,၂၉၃ မေ ၁၄၊ ၂၀၁၁ 0.0009% Preliminary 2011 census result Archived 8 June 2019 at the Wayback Machine.
ဂန်းစီးနိုင်ငံ (UK) ၆၂,၇၂၃ မတ် ၃၁၊ ၂၀၁၆ 0.00079% Official estimate
ဗမျူဒါး (UK) ၆၁,၉၅၄ ဇူလိုင် ၁၊ ၂၀၁၃ 0.00078% Official estimate Archived 29 January 2016 at the Wayback Machine.
ကေမန်ကျွန်းစု (UK) ၆၀,၄၁၃ ဒီဇင်ဘာ ၃၁၊ ၂၀၁၅ 0.00076% Official estimate
အမေရိကန်ဆမိုးအား (U.S.) ၅၇,၁၀၀ ဇူလိုင် ၁၊ ၂၀၁၅ 0.00072% Annual official estimate
မြောက်မာရီယာနာကျွန်းစု (U.S.) ၅၆,၉၄၀ ဇူလိုင် ၁၊ ၂၀၁၅ 0.00072% Annual official estimate
ဂရင်းလန်း (ဒိန်းမတ်နိုင်ငံ) ၅၆,၄၈၃ စက်တင်ဘာ ၁၄၊ ၂၀၁၆ 0.00071% Annual official estimate
မာရှယ်အိုင်းလန်း နိုင်ငံ ၅၄,၈၈၀ ဇူလိုင် ၁၊ ၂၀၁၅ 0.00069% Annual official estimate
တောင်အော်ဆက်တီးယား[မှတ်စု ၁၈] ၅၃,၅၃၂ အောက်တိုဘာ ၁၅၊ ၂၀၁၅ 0.00068% Preliminary 2015 census result
ဖရိုးကျွန်းစု (ဒိန်းမတ်နိုင်ငံ) ၅၀,၀၄၅ ဧပြီ ၁၊ ၂၀၁၇ 0.00063% Monthly official estimate
စိန့်ကစ်နှင့် နီးဗစ်နိုင်ငံ ၄၆,၂၀၄ မေ ၁၅၊ ၂၀၁၁ 0.00058% 2011 census result
Sint Maarten (နယ်သာလန်) ၃၉,၄၁၀ ဇန်နဝါရီ ၁၊ ၂၀၁၆ 0.0005% Official estimate Archived 30 September 2016 at the Wayback Machine.
လစ်တန်စတိန်းနိုင်ငံ ၃၇,၈၁၅ ဒီဇင်ဘာ ၃၁၊ ၂၀၁၆ 0.00048% Semi annual official estimate
မိုနာကိုနိုင်ငံ ၃၇,၅၅၀ ဒီဇင်ဘာ ၃၁၊ ၂၀၁၆ 0.00047% Annual official estimate
စိန့်မာတင် (ပြင်သစ်နိုင်ငံ) ၃၆,၄၅၇ ဇန်နဝါရီ ၁၊ ၂၀၁၅ 0.00046% Annual official estimate
ဂျီဘရောလ်တာနိုင်ငံ (UK) ၃၃,၁၄၀ ဒီဇင်ဘာ ၃၁၊ ၂၀၁၄ 0.00042% Annual official estimate
ဆန်မာရီနိုနိုင်ငံ ၃၃,၁၂၁ စက်တင်ဘာ ၃၀၊ ၂၀၁၆ 0.00042% Monthly official estimate
တာ့ခ်နှင့် ကေးကို့စ်ကျွန်းများ (UK) ၃၁,၄၅၈ ဇန်နဝါရီ ၂၅၊ ၂၀၁၂ 0.0004% 2012 census result
ဗြိတိသျှ ဗာဂျင်အိုင်းလန်း (UK) ၂၈,၅၁၄ ဇူလိုင် ၁၊ ၂၀၁၃ 0.00036% Official estimate Archived 29 January 2016 at the Wayback Machine.
ဘိုနီအာ (နယ်သာလန်နိုင်ငံ) ၁၈,၉၀၅ ဇန်နဝါရီ ၁၊ ၂၀၁၅ 0.00024% Official estimate
ကွတ်ကျွန်းစု (NZ) ၁၈,၁၀၀ မတ် ၁၊ ၂၀၁၆ 0.00023% Official quarterly estimate
ပလောင်းနိုင်ငံ ၁၇,၉၅၀ ဇူလိုင် ၁၊ ၂၀၁၅ 0.00023% Annual official estimate
အန်ဂီလာ (UK) ၁၃,၄၅၂ မေ ၁၁၊ ၂၀၁၁ 0.00017% Preliminary 2011 census result
ဝေါလစ်နှင့်ဖူကျူးနား (ပြင်သစ်နိုင်ငံ) ၁၁,၇၅၀ ဇူလိုင် ၁၊ ၂၀၁၅ 0.00015% Annual official estimate
တူဗားလူနိုင်ငံ ၁၀,၆၄၀ နိုဝင်ဘာ ၄၊ ၂၀၁၂ 0.00013% 2012 census result
နအူရူးနိုင်ငံ ၁၀,၀၈၄ အောက်တိုဘာ ၃၀၊ ၂၀၁၁ 0.00013% 2011 census result
Saint Barthélemy (ပြင်သစ်နိုင်ငံ) ၉,၄၁၇ ဇန်နဝါရီ ၁၊ ၂၀၁၅ 0.00012% Annual official estimate
Saint Pierre and Miquelon (ပြင်သစ်နိုင်ငံ) ၆,၂၈၆ ဇန်နဝါရီ ၁၊ ၂၀၁၅ 0.000079% Annual official estimate
စိန့်ဟယ်လယ်နာ၊ အစန်းရှင်း နှင့်
ထွစ်စတန် ဒါကူနှာ (UK) ၅,၆၃၃ ဖေဖော်ဝါရီ ၇၊ ၂၀၁၆ 0.000071% 2016 census result
မွန်ဆာရတ် (UK) ၄,၉၂၂ မေ ၁၂ဝ ၂၀၁၁ 0.000062% 2011 census result Archived3April 2019 at the Wayback Machine.
Sint Eustatius (နယ်သာလန်နိုင်ငံ) ၃,၈၇၇ ဇန်နဝါရီ ၁၊ ၂၀၁၅ 0.000049% Official estimate
ဖော့ကလန်ကျွန်းစု (UK) ၂,၅၆၃ ဧပြီ ၁၅၊ ၂၀၁၂ 0.000032% 2012 census result
နောဖုတ်ကျွန်း (ဩစတြေးလျနိုင်ငံ) ၂,၃၀၂ ဩဂုတ် ၉၊ ၂၀၁၁ 0.000029% 2011 census result Archived3March 2016 at the Wayback Machine.
ခရစ္စမတ်ကျွန်း (ဩစတြေးလျနိုင်ငံ) ၂,၀၇၂ ဩဂုတ် ၉၊ ၂၀၁၁ 0.000026% 2011 census result
Saba (နယ်သာလန်နိုင်ငံ) ၁,၈၁၁ ဇန်နဝါရီ ၁၊ ၂၀၁၅ 0.000023% Official estimate
နျူးရယ်နိုင်ငံ (NZ) ၁,၄၇၀ ဇူလိုင် ၁၊ ၂၀၁၅ 0.00002% Annual official estimate
တိုကလောင် (NZ) ၁,၄၁၁ အောက်တိုဘာ ၁၈၊ ၂၀၁၁ 0.000018% 2011 census result Archived 15 August 2012 at the Wayback Machine.
ဗာတီကန်စီးတီး ၈၀၀ ဇန်နဝါရီ ၁၊ ၂၀၁၄ 0.000010% Official estimate Archived2February 2017 at the Wayback Machine.
ကိုကိုး(ကီးလင်း) ကျွန်းများ (ဩစတြေးလျနိုင်ငံ) ၅၅၀ ဩဂုတ် ၉၊ ၂၀၁၁ 0.0000069% 2011 census result
ပစ်ကိန်ကျွန်းစု (UK) ၅၇ ဇူလိုင် ၁၊ ၂၀၁၄ 0.00000072% တရားဝင် ခန့်မှန်း
↑ သန်းခေါင်စာရင်း အချက်အလက်များသည် တရုတ်ပြည်မကြီးအတွက် ဖြစ်ပြီး တရုတ်နိုင်ငံ၏ အထူးအုပ်ချုပ်ရေးနယ်မြေများဖြစ်သော ဟောင်ကောင်နှင့် မကာအိုတို့ မပါဝင်ပါ။
↑ ပြည်နယ် ၅၀ နှင့် ကိုလံဘီယာ ခရိုင်ရှိ လူဦးရေ ဖြစ်သည်။
↑ ကရိုင်းမီးယား ကျွန်းဆွယ် နှင့် ဆီပတ်စတိုပိုမြို့ တို့ အပါအဝင်
↑ ပြင်သစ်၏ ပင်လယ်ရပ်ခြား နယ်မြေများဖြစ်သော ပြင်သစ်ပိုလီနီးရှား၊ နယူးကယ်လီဒိုးနီးယား၊ ပြင်သစ် တောင်ပိုင်းနှင့် အန္တာတိကမြေ၊ ကလစ်ပါတွန်ကျွန်း၊ စိန့်ဘာသလမီ၊ စိန့်မာတင်၊ စိန့်ပီရဲနှင့် မက်ဂလုံ နှင့် ဝေါလစ်နှင့်ဖူကျူးနား တို့ မပါဝင်ပါ။
↑ ဇန်ဇိဗာကျွန်း အပါအဝင်
↑ ကရိုင်းမီးယား ကျွန်းဆွယ် နှင့် ဆီပတ်စတိုပိုမြို့ တို့ မပါဘဲ ဒွန်ဘတ်စ်ဒေသ ပါဝင်သည်။
↑ ထိုင်ဝမ် (တရုတ်သမ္မတနိုင်ငံ) တွင် ကျင်းမင်၊ မားကျူ၊ ဖုန်ဟူကျွန်းများ စသည်တို့ ပါဝင်သည်။
↑ ပန့်လန်း နှင့် ဆိုမာလီလန်း တို့ ပါဝင်သည်။
↑ ကိုဆိုဗို မပါဝင်ပါ။
↑ အက်ဘ်ခါဇီယာ (၂၀၁၁ သန်းခေါင်စာရင်းအရ ၂၄၂,၈၆၂) နှင့် တောင်အော်ဆက်တီးယား (၂၀၁၅ သန်းခေါင်စာရင်းအရ ၅၃,၅၅၉) တို့ မပါဝင်ပါ။
↑ ထရန်နစ္စတြီးယား (၂၀၁၄ သန်းခေါင်စာရင်းအရ ၅၀၅,၁၅၃) မပါဝင်ပါ။
↑ နယ်မြေတစ်ခုလုံးရှိ အုပ်ချုပ်ရေးကို မော်ရိုကိုနိုင်ငံနှင့် ဆာရာဝီ အာရပ် ဒီမိုကရက်တစ် သမ္မတနိုင်ငံအဖြစ် နှစ်ခုပိုင်းခြားထားသည်။
↑ လွတ်လပ်သော နိုင်ငံဟု ဆိုသော်လည်း မော်လ်ဒိုဗာနိုင်ငံ၏ တရားဝင် အစိတ်အပိုင်း။
↑ လွတ်လပ်သော နိုင်ငံဟု ဆိုသော်လည်း ဆိုက်ပရပ်စ်နိုင်ငံ၏ တရားဝင်အစိတ်အပိုင်း။
↑ အက်ဘ်ခါဇီယာ၏ အခြေအနေသည် အငြင်းပွားဖွယ်ရာ ဖြစ်သည်။ လွတ်လပ်သည့်နိုင်ငံအဖြစ် ဆိုသော်လည်း နိုင်ငံအနည်းအကျဉ်းကသာ အသိအမှတ်ပြုထားသည်။ ဂျော်ဂျီယာနိုင်ငံအစိုးရနှင့် ကျန် ကမ္ဘာ့နိုင်ငံအများစုက အက်ဘ်ခါဇီယာသည် ဂျော်ဂျီယာနိုင်ငံ၏ အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုအဖြစ်သာ လက်ခံထားသည်။ ဂျော်ဂျီယာနိုင်ငံ၏ တရားဝင်နယ်မြေသတ်မှတ်ချက်တွင် အက်ဘ်ခါဇီယာသည် ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဖြစ်ပြီး အုပ်ချုပ်ရေးအစိုးရမှာ တဘီလစ်ဆီမြို့တွင် ရုံးစိုက်သည်။
↑ လွတ်လပ်သောနိုင်ငံဟု ဆိုသော်လည်း အဇာဘိုင်ဂျန်နိုင်ငံ၏ တရားဝင် အစိတ်အပိုင်း။
↑ တောင်အော်ဆက်တီးယား၏ အခြေအနေသည် အငြင်းပွားဖွယ်ရာ ဖြစ်သည်။ လွတ်လပ်သည့်နိုင်ငံအဖြစ် ဆိုသော်လည်း နိုင်ငံအနည်းအကျဉ်းကသာ အသိအမှတ်ပြုထားသည်။ ဂျော်ဂျီယာနိုင်ငံအစိုးရနှင့် ကျန် ကမ္ဘာ့နိုင်ငံအများစုက တောင်အော်ဆက်တီးယားသည် ဂျော်ဂျီယာနိုင်ငံ၏ အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုအဖြစ်သာ လက်ခံထားသည်။
↑ World Population Prospects 2017။
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=လူဦးရေအလိုက်_နိုင်ငံနှင့်_နယ်မြေဒေသများ_စာရင်း&oldid=743070" မှ ရယူရန်
၁၀ မေ ၂၀၂၂၊ ၁၅:၅၆ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး တည်းဖြတ်ခဲ့သည်။
ဤစာမျက်နှာကို ၁၀ မေ ၂၀၂၂၊ ၁၅:၅၆ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။